Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanjakana ho rava: Tonga amin’ny kihon-dalana farany i Madagasikara
Fanjakana ho rava: Tonga amin’ny kihon-dalana farany i Madagasikara
Tsy hilaza hiara-nahita ny zava-nitranga tamin’ny vanim-potoanan’ny tantaram-pirenena teto Madagasikara isika rehefa ho tonga ny fionganan’ny fanjakana na ny faharavany. Nanomboka hatrany amin’ny andron’ny repoblika voalohany izay nitondran’ingahy Philibert Tsiranana izao fanamarihana izao, ka nandalo tamin’ny andron’ny repoblika faharoa izay nitondran’ingahy Ratsiraka Didier, ary koa tamin’ny taona 2008 tamin’ny fotoana nitondran’ingahy Ravalomanana Marc. Amin’izao fotoana izao dia io mitranga amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina io koa ilay seho tamin’izany fotoana izany. Ny endriny no tsy mitovy fa ny tranga iray ihany.
Ingahy Philibert Tsiranana raha mbola nankafy ny fitondrana ny taona 1970. Nataon’ny fanjakana PSD (Parti social democrate) ampihimamba avokoa ny rafitra rehetra teto amin’ny firenena. Ny Pisodia (PSD) no nitazona ny 100% ny toerana rehetra. Teto Antananarivo ihany no azon’ny AKFM (Antokon’ny kongresin’ny fahaleovan-tenan’i Madagasikara). Tena nanana ny heriny ny PSD tamin’izany fotoana izany ka novetesina manerana ny nosy ny hoe “ PSD izahay mandrapahafatinay!”. Natanjaka ny FRS (Force républicaine de la sécurité), pôlisy nofanina manokana hiaro ny fanjakana. Indrisy nefa fa ny taona 1971 dia efa niova ny raharaha satria nioko ny tany atsimo notarihin’ingahy Monja Jaona. Nanampy izany koa ny fihetsehana teto Antananarivo notarihin’ny mpianatra ho dokotera ny taona 1972. Rava tamin’izany ny fanjakana’i Philibert Tsiranana. Tsakitsaky zato arivo no niafarany. Toa ahatsirovana ny ampihimamba tamin’izany ny raharaha misy ankehitriny.
Ny taona 1976-1990 dia natanjaka be tsy nisy toa azy ny fanjakan’ny Amiraly Didier Ratsiraka. Nalaza ny AREMA (Antokon’ny revolisiona Malagasy) ary nanana rafitra raitra sy natanjaka. Natanjaka torak’izany koa ny RESEP (Régiment de sécurité présidentielle). Nalain’ity antoko ity avokoa ny fitantanana ny andrim-panjakana tamin’izany fotoana izany. Ny fahaizana sy ny drafitra hitondrana fanjakana dia nazava tsara ary nampirehareha ny Malagasy tanteraka izany na teto Madagasikara na tany ivelany. Raha vao miteny ny Amiraly Didier Ratsiraka dia mampandry sofina avokoa na vahiny na Malagasy mihaino ny fanambarana sy ny fanazavany ny raharaham-pirenena. Tamin’izany fotoana izany no nampalaza ny hoe “paradisa sosialista” teto Madagasikara. Indrisy nefa fa rava izany raha mbola tsy tonga akory ny taona 2000 izay noheverina fa hahatanteraka izany tanjona izany. Indray mipi-maso dia rava.
Tonga teo amin’ny fitondrana indray ingahy Ravalomanana Marc ny taona 2001-2006. Inona no tsy nampanantenain’ity filoham-pirenena ity tamin’ny vahoaka Malagasy? Ny mahantra hatao mpanankarena ary ny mpanankarena tsy halaina ny eny an-tanany fa hampitomboana. Nataon’ity filoham-pirenena ity izay hahapotika ny antoko pôlitika hafa rehetra ivelan’ny TIM (Antoko Tiako i Madagasikara). Feno TIM teto Madagasikara hatrany ambanivohitra rehetra any. Mpikambana teo anivon’ny antoko Tim avokoa ny ankamaroan’ireo solombavambahoaka. Novana ho TIM koa ny senatera sy ny filohan’ny andrim-panjakana rehetra. Hatrany amin’ny sefom-pokontany sy ny ben’ny tanàna dia TIM tanteraka.
Azon’ingahy Ravalomanana Marc moramora foana ny fe-potoana (mandate) vaovao hitondrana ny tany sy ny fanjakana ny taona 2007-2012. Nampiasainy araka izay itiavany azy ny fahefana teo ampelatanany. Toy ny teo alohany rehetra dia nirehareha ity filoha ity sy ny antokony. Nieritreritra ny tsy ho tratran’ny aloka mihitsy. Ny taona 2008 nefa dia nanomboka nivadika ny rasa. Tezitra ny vahoaka nefa tsy afa-nanoatra noho ny tsindry hazo lena nataon’ity filoha izay nosokajian’ny maro ho mpitondra jadona ity. Ny taona 2009 dia rava ny fanjakan’ingahy Ravalomanana Marc na dia nampiditra mpikarama an’ady avy any ivelany hiaro azy izy.
Maro ny zavatra azo lazaina fa ampahany amin’ny tranga niafaran’ny fanjakana nifanesy teto ireo. Mbola izany seho amin’ny faharavana fanjakana izany koa no mitranga ankehitriny amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao. Atao ampihimamba ny andrim-panjakana rehetra. Terena hiditra eo anivon’ny antoko HVM ( Hery vaovao ho an’i Madagasikara) ny mpiasam-panjakana ambony any amin’ny faritra. Ampiasana izay tsy izy ny hery famoretana avy amin’ny Emmo/reg. Amin’ny fotoana farany hahatapitra ny fotoana fitondrana vao mody hanao fanovana Lalàmpanorenana sy hametraka ireo andrim-panjakana tokony ho vita tamin’ny fiandohan’ny fitondrana sy ny zavatra hafa koa..
Tsy nahasakana ny faharavan’ny fanjakana nefa izany rehetra izany. Mizotra mankany amin’ny faharavan’ny fanjakana toa ny teo aloha ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Ny fanjakana irery sisa no mahita fa mbola mandeha ny raharaha fitondrana eto Madagasikara. Lazaina sy dradradradraina ankehitriny fa miasa ny fanjakana sy ny governemanta. Tokony hanao jery todika izy ireo fa diso tanteraka izany fomba fijeriny izany.